Iindaba -I-Rugao ifumana kwakhona iindlela ezi-4 zikamasipala nezibane zesitalato ze-solar
I-Rugao ibuyisa iindlela ezi-4 zikamasipala nezibane zesitalato ze-LED
Iprojekthi yokulungiswa kwezibane ze-LED zeZhongshan East Street izibane kwindawo esezidolophini kunokuthiwa yiprojekhthi emele uphuhliso oluhlaza kumasipala waseRugao. Ekuqaleni le ndlela yayisebenzisa izibane zesodiyam ukukhanyisa. Ukulungiselela ukukhuthaza izibane ezinoqoqosho, izibane zesitalato ezingama-240W zelanga zithathe indawo yezibane ezingama-294 500W, kunye ne-120WIzibane zesitalato ze-solarkufakwe izibane zesodiyamu ezili-154 250W. Umyinge wokonga umbane yi-65%, egcina i-440,000 kWh ngonyaka. Gcina ngaphezulu kwe-390,000 yuan kwiibhili zombane.
Emva kwe- isibane esitratweniUtshintsho, ukukhanya okumndilili komphezulu wendlela kufikelele kumaxesha ayi-1.5 ukukhanya okuphakathi kwesibane sokuqala sesodiyam. Ubomi besibane obungaphezulu kweeyure ezingama-50 000 budlula kude ubomi besibane sesodiyamu iiyure ezingama-8,000. Ithuba elide lewaranti eliyiminyaka emi-5 ukuya kwemi-6 liyafezekiswa, kwaye ukonga umbane ngonyaka zii-2.685025 zezigidi zeekhilowathi, Ukugcina i-yuan yezigidi ezi-2.368192 kwiindleko zombane, ukunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2 ngeetoni ezili-1022.99 kunye nokugcina iitoni ezingama-886.06 zamalahle asemgangathweni.
ukhuseleko, ukukhuselwa kokuqhushumba, kunye nokuhambelana kombane.
UHenning Helmers, intloko yeqela lophando, uthe: “Le ndlela yefilimu ebhityileyo inezinto ezibini eziluncedo ekusebenzeni kakuhle. Okokuqala, iifotoni zibanjiwe esiseleni ukwandisa ukuthathwa kwamandla e-photon kufutshane nomda webhendi. Kwangelo xesha, oku kulahleka kobushushu kunye nelahleko yokuhambisa kuyancitshiswa, okwenza ibhetri isebenze ngakumbi. Okwesibini, iifotoni zangaphakathi eziveliswa kukuphindaphinda ngemitha ziyabanjwa kwaye zisasazwe ngokufanelekileyo. Oku kwandisa ubomi bokuphatha ngokusebenzayo kwaye konyusa umbane.
UAndreas Bett, uMlawuli weZiko loPhando nge-ISE, uthe: “Ukuhanjiswa kwamandla ombane kukhangeleka kuninzi okusetyenziswayo. Umzekelo, uhlolo lwesakhiwo seinjini yomoya; Ukubeka iliso kumbane ombane ophezulu, iisenzi zepetroli okanye ii-passive optical network kwiitanki zepetroli zomoya; unikezelo lwamehlo lwezinto zofakelo lwangaphandle okanye unikezele ngombane ngaphandle kwamacingo kwizicelo ze-IoT. ”
Ngokweengxelo, ngo-Epreli 2021, abaphandi be-ISE bafeze ukusebenza ngokuguqula okungama-26% kwiiseli zelanga zesilicon ezinamacala amabini, irekhodi.
UMercom ngaphambili waxela ukuba i-III-V / Si iseli yeseli yelanga iphuhliswe ngokuthe ngqo kwi-silicon ngabaphandi be-ISE baseta irekhodi elisebenzayo le-25.9%.